Jacayl Dhex Maray Gabadh Ciraaqiyad Ah Oo Qaxoonti Ah Iyo Askari Reer Mecadonia Ah+Sawiro
(Hadhwanaagnews) Sunday, January 08, 2017 14:06:41
Bobi Dodevski ma ahayn in uu shaqeeyo maalin Jimce ah oo roob da'ayay markii uu la kulmay xaaskiisa mustaqbalka Nuura, balse 35 jirkan oo ka tirsan ciidammada ilaalada ee xadka Macedonia ayaa ogolaaday in uu shaqeeyo si uu u buuxiyo booska saaxiibkii oo aan shaqada soo galin.
Kumannaan ruux oo qaxooti ah oo rajaynayay in ay xadka ka talaabaan maalintaas waxaa ka mid ahaa Nuura Arkavazi oo ah gabadh yar oo heerkooda kala soo safartay dalka Ciraaq.
Nuura oo 20 jir ah ayaa ka soo tagtay gurigoodii ku yaalay Diyala oo ah degmo ku taalla bariga Ciraaq
ka dib markii ay dagaallo ka dhaceen 2016-kii, iyada oo ay weheliyaan waalidkeed, walaalkeed iyo walaasheed.
Waxay so galeen safar dheer iyagoo ka talaabay xadka Ciraaq oo galay Turkiga ka dibna doon ayay u raaceen jasiiradda Lesbos ee dalka Giriigga iyaga oo ugu danbaynna tagay xadka Macedonia.
Iyaga oo wali jooga xadka qoyskuna ay ka war sugayaan in loo ogolaan doono in ay galaan Macedonia ayay Nuura la kulantay Dodevski waxaana soo jiitay indhaheeda.
Markii ay lamaanahan kulmeen ma wanaagsanayn xaaladda qaxootiga iyada oo ay dalalka Balkan-ka ku yaalla ay xadka ka xirteen qaxootiga.
Nuura ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegtay in riyadeedu ay ahayd in ay Jermalka kula noolaato qoyskeeda.
Waxay ku hadashaa lix luuqadood markii ay xadka timidna way xanuunsanayd sidaas daraadeed waxaa lagu hagaajiyay Dodevski maadaama oo uu Ingiriiska yaqaano.
Dhawr jeer ayay dhulka ku dhacday xanuunka hayay awgii, Dodevski ayaana si dhakhso oogu wareejiyay laanqayrta cas si ay u badbaadiyaan, sida ay Nuura u sheegtay barnaamijka dunida la hadla ee Newsday ee BBC-da ka baxa.
Inkastoo Dodevski uu isku dayay in aan laga garanin dareenkiisa haddana waxaa markiiba fahantay haweenay askariyad ah oo la shaqaynaysay.
Markii askariyadaasi ay aragtay in maankiisu uusan joogin ayay kutiri waxaan u malaynayaa in uu jacayl ku hayo oo qof xadka jooga uu qalbigaagii xaday.
Noora ayaa sheegtay in ay markaaas wax darentay oo ay rabtay in ay la sii sheekaysato.
Dodevski wuxuu sheegay in laga yaabo in uu arkay gabdho ka qurux badan Nuura balse ay indhaheedu uga soocmeen dadka kale oo dhan uuna go'aansaday in ay noqoto xaaskiisa.
Markii ay ka soo kabatay xanuunkii hayay waxay billawday in ay caawiso hay'adda laanqayrta cas ee dalkaas.
Dadkii qaxootiga ahaana waxay ka warsugayeen waxa ay xaaladdoodu noqon doonto balse Nuura iyo Dodevski waxay billaabeen in ay si fiican isu sii bartaan.
Iyada iyo hooyadeed ayuu u sii qaaday suuq u dhawaa si uu ugu soo gado cunto iyo dhar, intii ay dhexda sii socdeen wuxuu la dheelayay caruurta qaxootiga ah isaga oo u dhaqmayay si ka dabacsan askarta kale.
Habeen ayay casho adeen waxaana Dodevski ka muuqatay in ay shucuurtiisu kacsan tahay isaga oo biyo badan cabay gacmihiisuna ay gargariirayeen wuxuuna nuura waydiistay in ay is guursadaan balse waxay ku tiri waad kaftamaysaa toban jeer ayuuna ku celceliyay, Markii dambe ayayna ogolaatay in ay xaaskiisa noqoto.
Lamaanahan oo Muslim iyo Kiristaan kala ah ayaa isku aroosay magaalada Kumanovo ee dalka Macedonia waxaana ka soo qaybgalay 120 ruux oo diimo kala duwan aaminsan, kuwaas oo ay ku jiraan asxaabtii ay Nuura iskala shaqayn jireen laanqayrta cas.
Nuura ayaa la waydiiyay guurkooda dagdaga ah waxayna ku jawaabtay in uu jacaylkoodu ka bilawday aragtidii koobaadba.
Inkastoo qoyskeedu uu galay Jermalka Nuura waxay ku hartay Macedonia waxayna la nooshahay ninkeeda iyo saddex ilmood oo uu dhalay.
Balse lix ruux ayay noqon doonaan Nuura oo farxad la qoslaysa ayaana BBC-da u sheegtay in ay uur afar bilood ah leedahay.